Imoto entsha 'Corvette Stingray "kusukela Chevrolet
Car "Corvette" kamakhi American Chevrolet linomlando othakazelisayo kakhulu. It iqala ezikude 1953. Yilokho uma ukukhanya waphuma ngowokuqala 2 enezihlalo ezemidlalo imoto evela enkampanini ngaphansi kwegama Corvette. Njengoba imodeli salandelwa 7 izizukulwane. Futhi manje, kusukela ngo-2013, kwaveza izimoto owesikhombisa nolokugcina. Futhi zaziwa ngokuthi C7 Stingray. Yilokho ngakho ngingathanda bakutshele okwengeziwe.
Imoto 'Corvette Stingray "ubukeka nenhle kakhulu, ashukumisayo futhi zibe nolaka. Futhi ukubukeka kwakhe kuleyo akuyona kuphela enhle, kodwa futhi ezisebenzayo.
Ngokwesibonelo, ngenxa ukwakhiwa okunjalo, yesikhulumi babekwazi ukunikeza esiphezulu mass ukusatshalaliswa eduze ngezimbazo adhesion kakhulu amasondo endleleni. A engayitholi emikhulu, kuhlangene uhlelo ukupholisa, ukuvumela injini ngokushesha futhi kalula sokuphumula ngasiphi umthwalo futhi ngaphandle okweqile. umklamo ezithuthukisiwe, yena, awagcini nje umzimba ngaphezulu ukubukeka ngokushesha futhi sporty kodwa futhi kwenza intuthwane emoyeni ukumelana.
Spoiler adlala indima. Bona ukunciphisa amandla nokuphakamisa, okuyinto ebangele lapho umshayeli iqala ukushayela ngesivinini. Futhi ngenxa yokuthi LED ukusebenzisa yokukhanya, hhayi kuphela ephethwe ukwengeza "ukunambitheka" yokubukeka, kodwa futhi ngcono ukukhanya amasignali ithuba. izibani Unyembezi emise bheka original kakhulu, kodwa kubalulekile kakhulu ukuthi kuphrojekthi ray ukukhanya esikhanyisa isikhala esiphezulu phambi kwakhe. Ngokuvamile, lezi zindawo zibe khona Abaklami Ingaphandle ukuza ngempela umthwalo omkhulu wemfanelo.
Entsha imoto 'Corvette' okujabulisa ingaphakathi kokunethezeka. Ngo inqubo kuphela eliphezulu lesikhumba, carbon, kanye ne-aluminium yasetshenziselwa sekugcineni ophucuziwe.
Ufuna ngaphakathi, uzophawula ngesikhathi esisodwa esiwusizo futhi functional ithuluzi panel. Futhi yabakhanga izihlalo ezemidlalo, eyenziwe ifomu elula amabhakede.
Car "Chevrolet Corvette" ngonyaka odlule zokukhiqiza inama lesinotsile. Lokhu "isimo" obhekene naso futhi 'cruise ", olawula indlela yokudlulisela manual, isikrini ezimbili ezinkulu, isondo Amatebhe ayo, ulwazi kanye multimedia uhlelo, uhlelo umsindo nge 9 izipikha, qala injini ngaphandle ukhiye, navigation nezinketho esiklanyelwe ukunakekelwa nokuphepha yomnikazi umshini. Ukuze uthole izihlalo Imali eyengeziwe ukufuthelana, izilungiselelo inkumbulo, 10 Izipikha, kukhethwa umbala izihlalo kanye nezinye izinketho akuzona kudingekile ikakhulukazi.
Yini ngaphansi hood?
Imoto 'Corvette' inama enamandla 466-amahhashi 6.2-litre engine, sibonga yena uzokwazi ukuba ukhule ufike ku-100 km / h ngemizuzwana engu 3.8 nje. Kuyaphawuleka ukuthi umjikelezo elihlangene, kule moto ibusa mayelana 12 amalitha uphethiloli, okuyinto nesizotha kakhulu imoto yezemidlalo. Imoto idolobha uchitha cishe 18-19 amalitha. By the way, ijubane esiphezulu imoto 292 km / h.
Nokho, kwezinye izimakethe abathengi uphiwa inguqulo yalesi imoto ibe namandla ngokwengeziwe. It is agibele amahhashi 650-amahhashi injini, usebenza Ngohlelo akuyona 7-speed "Mechanics", kodwa i-8-band "okuzenzakalelayo". Ijubane lokhu imoto yezemidlalo ongafinyelela izinga 318 km / h.
Ezinye izici lobuchwepheshe
Ukukhuluma emotweni, "Corvette", isithombe okuyinto anikezwa ngenhla, kufanele kuphawulwe ukwakhiwa yayo. Kusekelwe uzimele isikhala eyenziwe aluminium, futhi phakathi ukuthuthukiswa lonke ephezulu amandla steel yayisetshenziswa. By the way, hood futhi esikhiphekayo ophahleni kwesigaba, kwanqunywa ukuba enze carbon fiber. Ngenxa konke abebengakwenza ukwenza imoto yezemidlalo Kulula kakhulu. Inesisindo kg 1539 kuphela.
Kuyathakazelisa ukuthi i-American big imoto 'Corvette' elakhiwa ngaphansi kohlelo, eyaziwa ngokuthi Transaxle. Iphuzu eliyinhloko ukuthi ukudluliswa isendaweni oluvala amasondo labaqaphi elingemuva. Futhi isisindo sibekwe basakaza eduze izimbazo.
Okuningi kule moto inama ezimele ukumiswa wishbone ku pair, ifakwe i ukushaqeka wezinciphisi ngekhompyutha elawulwa. Ngaphezu kwalokho, it has amandla kagesi ayo, enikeza operation lula. Futhi anakho amabhuleki ezinhle. Ziklanyelwe ochwepheshe Brembo isivele ukhuluma ngani izinga zabo eziphakemeyo.
Ekugcineni - a amazwi ambalwa mayelana intengo. "Njengoba emangalelwe" inguqulo ye injini ukuthi ukhiqiza 650 "amahhashi", kuwufanele ecishe ibe yizinkulungwane 200 zamaRandi. Okungukuthi, ama-ruble angu yizigidi ezingu-13. Inguqulo ka "Grand Sport" izobiza okungenani ezingu-66 dollar ayinkulungwane.
Abantu asebevele umnikazi wale moto, uthi - umshini enjalo kuwufanele imali. Phela, kuyinto izinzuzo mass ngempela. Zibonisa esihle ukusheshisa Dynamics, umklamo kakhulu, izinga yokukhanya, ingaphakathi ukhululekile, amandla. Okumbi Yiqiniso, kukhona - kuyinto kokwehla ongaphakeme, petrol kanye nokugcinwa ezibizayo. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi imoto kungokwalabo esigabeni izimoto elite ezemidlalo. Ngakho ukuthi ezimbili zokugcina nemibi luqedwe.
Zil-112C: incazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Ukufakwa sump: indlela esikhundleni?
Likuphi VVTI valve futhi kanjani ukuhlola?
Car "Ferrari F40": Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Cadillac DeVille - imoto, olubheka admiringly
Emhlophe - isithelo AmaKhosi
Ingabe soda ngempumelelo esiswini esingenalutho?
Ukwa ngomunwe kancane ngomlenze wakhe: Usizo lokuqala
Kanjani ukukhiqiza Jack okuzenzela semoto
Izinhlobonhlobo best of utamatisi
Indlela ukukhubaza "Inkokhelo Easy" (MTS)? Step by step Umhlahlandlela
Izitsha Plastic: isithombe, ukubuyekezwa
Izinzuzo esemqoka yokukhiqiza of emnyango iminyango ku-oda
Yekuchumana sendlela ukuqedela ezingeni "pirate ngcebo" - 1066
Ukubaluleka esiwusizo sokuba nezinto eziqondile mqondo: isibonelo. Inhloso mqondo
Usuku Lwamazwe Ngamazwe zabesilisa: umlando kanye nezici holidi